Mitampify Ao Hong Kong i Snowden, Mihetsika Ny Diplomasia Eo Amin’ny Shina- Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jona 2013 3:47 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, Español, srpski, Português, English
Toy ireny horonantsary ao hollywood ireny : navoakan'ny mpiasa iray taloha tao amin'ny CIA ny tsiambaratelo lehiben'ny fanjakana no sady mitady fialokalofana any amin'ny tanin'ny fahavalo, raha toa kosa ka niakatra be ny maripana mikasika ilay raharaha ratsy.
Edward Snowden, 29 taona, Amerikana manam-pahaizana manokana amin'ny fikirakiràna teknolojia, izy tenany mihitsy no niaiky fa namoaka ny pitsopitsony amin'ilay resaka fanaraha-maso ny fifandraisana an-telefaona sy aterineto nataon'ny governemanta Amerikana. Niafina tao aminà hotely iray tao Hong Kong i Snowden, izay toa efa nilaozany ny 10 Jona 2013. Heverina fa mbola ao Hong Kong ihany izy, fa tsy fantatra mazava izay tena itoerany.
Nifanandrify indrindra tamin'ilay fitsidihana nandritry ny roa andro nataon'ny Filoham-pirenena Shinoa Xijinping an'i Etazonia hanatsarana ny fifandraisana amin'ny Filoha obama iny fanambaràna mafotaka nataon'i Snowden iny. Talohan'ny nialàn'i Xi tao Beijing, noheverin'ireo filazam-baovao fa hanao fanerena an'i Shina i Etazonia amin'ilay resaka fitsikilovana anaty aterineto izay nampikorontana ny firenena roa tonta nandritry ny volana maro. Nilaza i Etazonia, fa efa im-betsaka i Shina no nanao fitsikilovana anaty aterineto nikendrena ireo Orinasa Amerikana sy sampan-draharaha maro tao amin'ny governemantany, fanambaràna izay nolavin'i Shina mafy tokoa.
Iny resabe iny dia mety hanampy be dia be an'i Pekin amin'ny sehatra politika, manam-pahaizana manokana no voalazan'ilay gazety Wall Street Journal fa nilaza izany. Eo am-piandrasana izany aloha, tena nahatonga onjan-kevitra maro mikasika ny fitiavan-tanindrazana teo amin'ny tontolon'ny bilaogy tao Shina iny resaka Snowden iny, niaraka tamin'izany ny fanararaotan'ireo mponina anaty aterineto hitroatra noho ny amin'ny fitsofotsofohana faobe ataon'ny governemanta Amerikana.
Edward Snowden, ilay namoaka ny programam-pitsikilovan'i Etazonia, tafaresaka tamin'ilay gazety Anglisy The Guardian. Eo amin'i sarin’ i Youku
Yang Rui, mpanolotra fandaharana amin'ny teny Anglisy ao amin'ny fantsom-pahitalavitra Nasionaly CCTV ao Shina dia naneho hevitra tao amin'ilay sehatra malaza fitorahana bilaogy madinika Sina Weibo toy izao manaraka izao :
Inona no tokony hataon'ny governemanta Shinoa ? Mila fanampiana ilay Amerikana tanora sady tonga saina ! Hoy ny BBC : Nanambara ilay mpiasan'ny CIA teo aloha hoe manana fahafahana ny hanara-maso araka izay tiany ireo resaka an-telefonina an-tapitrisa sy hafatra anaty aterineto maro manerana izao tontolo izao anaty fotoana fohy ny governemanta Amerikana, ny NSA dia afaka miditra amin'ireo lohamilin'ireo Orinasa lehibe sivy mikirakira Aterineto, toy ny Facebook, Google ary Yahoo. I Snowden izay 29 taona dia mbola mijanona ao Hong Kong amin'izao fotoana izao, miatrika ny mety hampodiana azy hody araka ny lalàna. Miampanga an'i Shina ho mangalatra IP (adiresy fampiasa amin'ny aterineto) i Etazonia, ary mba ahoana ny momba an'i Etazonia manokana?
Zhang Jiang, Mpampianatra Fanaovan-gazety ao amin'ny Oniversiten'i Beijing Fianarana ny tontolo Iraisampirenena, dia nanoratra toy izao tao amin'ny kaontiny Weibo :
Hisoratra anaty tantaran'ny fanaovan-gazety iny nataon'i Édouard Snowden iny, ny nilazany ny [nataon'ny] governamanta Amerikana dia tokony hahazoany fiarovana/fiantohana. Na dia amin'ny anaran'ny ady atao amin'ny fampihorohoroana aza, tsy manan-jo hanao fitsikilovana midadasika amin'ny fifandraisan'ny olom-pirenena an-telefonina sy anaty aterineto lehibe toy izany mihitsy ny governemanta Amerikana, tokony haka lesona avy amin'izany ireo firenen-kafa.
Fan Haitao, mpianatra Shinoa ao amin'ny Oniversiten'i Kolombia ao Etazonia, dia namintina ny endrika roa ananan'ilay adihevitra :
I Edward Snowden izay mizaka ny zom-pirenena Amerikana dia nanao ampamoaka momba ny fisian'ny fitsikilovan'ny governemanta Amerikana ireo antso an-telefaona, anaty Aterineto sy mailaka, tojo tafiotram-panakianana mivaivay mikasika fanitsakitsahana ny lalàm-panorenana ny governemanta ankehitriny. Taorian'ny nijereko ny vaovao tamin'ny fahitalavitra, dia hitako fa misy lafiny roa izany. Ny mpikambana ao amin'ny Kongresy milaza fa zon'ny governemanta ny manao fanaraha-maso, ambany fanaraha-mason'ny tribonaly ary, etsy andaniny misy ora sy ny faharetany ao anatin'izany fitsikilovana antso an-taroby izany, fa tsy ahitàna anarana kosa. Ny ankilany indray, milaza fa tokony hisy fivoriambe fakàn-kevitra mikasika ny raharaha fanaraha-maso, mba hahafahan'ny olona tsirairay manapa-kevitra.
Ilay mahitsy fiteny iray, Wu Zuolai, dia tonga niaro an'i Etazonia nanao hoe :
Misy ireo firenena mampiasa [fitsikilovana] mba hiadiana amin'ny asa fampihorohoroana, ny sasany mampiasa izany ho fanitsakitsahana ny zon'olombelona, tsy dia ampiasaina amin'ny zava-dratsy loatra ny torohay mahakasika ny olon-tsotra any amin'ireo firenena demokratika, fa ireo firenena mpampiasa didy jadona kosa no mampiasa izany hikatsahana fahefana misimisy kokoa.
Ny sasany, toa an-dry Ahua de Yisaka Dao, dia nanontany tena ny amin'ny antony nisafidianan'i Snowden an'i Hong Kong :
Niresaka betsaka ny raharahan'i Edward Snowden izahay roa, tahaka ireny horonantsary malaza ireny ilay izy! Heveriko fa tena hafahafa ihany ny nandehanany ho eto Hong Kong, tsy fantany ve hoe tsy manana ny fahalalahany intsony i Hong Kong, fa hay efa baikon'ny Antoko Kaominista Shinoa ? Ny hany fandrentsika dia ny Shinoa mandeha mangataka fialokalofana any Etazonia, fa toa mety hahaliana ihany raha ny Amerikana no hangataka fialokalofana amin'ny governemanta Shinoa….
Lvqiu Luwei, mpanao gazety fanta-daza aminà fahitalavitra iray izay manana mpanjohy 2,7 tapitrisa ao amin'ny Weibo, no nanoratra hoe :
Ho an'i Snowden, tena tsy misy atahorana ve ny fipetrahany ao Hong Kong? Raha nangataka fialokalofana eto izy, mila miandry fotoana ela izy amin'ireo dingana rehetra ilaina arahana amin'izany, mandra-piandry izany anefa, afaka ny hipetraka ara-dalàna eto izy, kanefa tsy afaka ny hiasa. Nitady azy daholo ny filazam-baovao rehetra, hitan'izy ireo ihany avy eo ilay hotely [nipetrahany], ary nilazana fa hoe efa niala tao io olona voalazana anarana io. Lasa aiza ary izy? Angamba lasa nihinana “curry” any amin'ny tranoben'i Chongqing?
Ny lahatsoratra tao amin'ny The Guardian sy The Washington Post no namoaka ilay programam-pitsikilovanan'ny governemanta Amerikana ny 6 Jona 2013, ary tsy nanondro azy ho loharanon'izany, kanefa i Snowden tenany mihitsy no namoaka taty aoriana fa izy no tao ambadik'iny famoahana tsy nahazaona alalàna iny. Tao anatinà lahatsary fanadihadina nakarina aty anaty aterineto, nilaza i Snowden fa nisafidy ny hitsoaka aty Hong Kong noho ny “Fanekeny zo sy ny fahalalahana haneho hevitra ho an'ireo mpanohitra ara-politika”
Hong Kong, izay zanatany Britanika taloha, dia niverina ho ambany fifehezan'i Shina ny taona 1997. Araka ny fifanarahana mikasika ny famerenana mody ireo olona enjehan'ny lalàna nifanaovan'ilay tanàna tamin'i Etazonia, dia mety mbola ho voaraoka sy voahenjika ihany izany i Snowden. Tsy mbola nanao fanambaràna ofisialy mikasika izany aloha ny governemanta Shinoa noho ny fisian'ny andro tsy fiasana telo andro misesy.
Na izany aza, noraisin'ireo filazam-baovao ao Shina ilay raharaha malaza, ary notsongainy ilay fanambaran'i Snowden an'ny Hong Kong ho toy ny toeran'ny ” Fahalalahana maneho hevitra”. Ao amin'ny Tanibe Shina, manjaka be ny sivana anaty aterneto, ary misy ireo legiona antsoina amin'ny hoe polisin'ny aterineto nokaramaina hanara-maso ireo fanehon-kevitra ara-politika saropady.
Tsy mahagaga araka izany ny mahita fa raha toa mandoka an'i Snowden ny sasany amin'ireo Shinoa mponina anaty aterneto, ny sasany kosa milàza fa nitsoaka aty amin'ny tany tsy tokony nandehanany izy, mitondra amin'ny fahatsapàna ny politikam-pifehezana henjana dia henjana ataon'i Pekin mampitombo hatrany ny fanaraha-maso manerana an'i Hong Kong.
Ilay lehiben'ny Google taloha tao Shina, Kaifu Lee, dia nandoka an'i Snowden tao amin'ny Weibo :
Taorian'ny fijerena ilay tafatafa natao tamin'i Snowden, dia tena miaiky ny foto-pisainany sy ny maha-izy azy aho, ary halàko ny fandaharanasa Prism ataon'ny Amerika. Saingy nandika ny lalàna tao Amerika anefa izy (famoahana ny tsiambaratelon'ny fanjakana). Noho izany, ny fanapahan-kevitra tsara indrindra dia ny fahazoany fialokalofana politika ( Iceland ve ?).
Mpisera iray ety anaty aterneto antsoina hoe Fengmao Lingjiao no nanoratra toy izao :
Ratsy fisafidy toerana [izy]. Amin'ny fangatahana hialokaloka aty aminà firenena izay ambany dia ambany ny fitsinjovana ny maha olona sy ny maha izy azy, ny hany hiafarany dia mety hoe hatao fitaovana [izy]. Ny Tanibe no lehibe/sefo, ary lehibe mpandraharaha baribariana tsy mahalala fomba tsy misaina, izay efa zatra ny mamono sy manao afera [maloto]. ny fomba fisainana “havako raha misy patsa sy Vato natsindry ahazana” no mibahan-toerana : Fahiny [ny governemanta] dia sady tompony no mpampihatra ny zo (mpifikitra amin'ny nentin-drazana).